मोदी पछ्याउँदै ओली- विचार - कान्तिपुर समाचार
मिटु आन्दोलनको सन्देश
पीडितले आफूमाथि भएका घटना कुनै पनि बेला सार्वजनिक गर्न सक्छन् भन्ने कुराले महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार न्यूनीकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
मंसिर २१, २०७५ नारायणी देवकोटा
काठमाडौँ — जीवनको कुनै कालखण्डमा भोगेको यौन दुर्व्यवहारका साथै आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषणको विषयमा महिला बोल्न थालेका छन् । केही महिलाले अलि चर्को र केहीले खुसुर–खुसुर भए पनि कुरा गर्न थालेका छन् । कसैले नामै किटेर त कसैले नाम नतोकिकन, तर बुझिनेगरी भन्न थालेका छन् ।
मिटु आन्दोलनका विषयमा कुरा हुँदा धेरैले ‘मन मिलेसम्म प्रेम, मन नमिले बलात्कार’, ‘आफ्नो घरका पुरुष नमुछिँदासम्मको आन्दोलन’, ‘पुरुष विरोधी आन्दोलन’, ‘विदेशी आन्दोलनको नक्कल’, ‘सहरिया मध्यम वर्गका महिलाको मुद्दा’ जस्ता टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । यो लेख मिटु र नेपालमा यौन हिंसाको बहस, प्रभावितको सामाजिक न्याय र आन्दोलनले भविष्यमा पार्ने प्रभावमा केन्द्रित छ ।
नेपालमा मिटुको बहस भर्खरै प्रवेश गरेको भए पनि यौन हिंसाको विषयमा बहस, पैरवी र काम भने भर्खरै सुरु भएको होइन । द्वन्द्वका घटनामा केन्द्रित भएर गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान र काम गर्ने मानिसले १० वर्षे जनयुद्धका समयमा भएका बलात्कारका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा दबाब दिइरहेका थिए ।
बलात्कार र यौनजन्य हिंसा घटना दर्तालाई कुनै समय–सीमा राखिनुहुन्न भनेर नेपाली महिलाले आवाज उठाउन थालेको एक दशक भइसकेको छ । सिमान्तकृत समुदायका महिलामाथि कथित माथिल्लो जात र वर्गका पुरुषले गरेका यौन उत्पीडनका विषयमा लेख्न (आख्यान, गैरआख्यान), फिल्म निर्माण गर्न वा बहसका विषय बनाउन थालेको पनि धेरै भइसकेको छ ।
आन्दोलन किन बलियो ?
मिटु आन्दोलनले अहिले किन सशक्त रूप लिँदैछ वा महिलाले किन वर्षौं अगाडि भएका यौन दुव्र्यवहार र उत्पीडनका विषयमा बोल्दैछन् भन्ने कुराको खास सामाजिक ऐतिहासिकता छ । यति बेला धेरै हदसम्म नेपालको संविधान, कानुन महिलामैत्री छ, समाजमा महिला र महिलाको यौनिकतालाई हेर्ने नजरिया परिवर्तन हुँदै गएको छ ।
सार्वजनिक र सामाजिक सञ्चार माध्यमको पहुँच सबैमा पर्दै गएको छ । महिलाहरू आर्थिक रूपले सशक्त हुँदै गएका छन् । पुरुष (बा, दाइभाइ वा श्रीमान) प्रतिको परनिर्भरता हट्दै जाँदा महिलामा समाजले जेसुकै भने पनि ‘म यो मुद्दामा लड्न सक्छु’ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ ।
महिलाहरू आफूमाथि भएको यौन उत्पीडनका घटना, ती घटनाले उब्जाएका समस्या, मानसिकतामा पर्नगएको आघात र पुरुषलाई हेर्ने महिलाको आफ्नै नजरियाको विषय कुरा गर्न थालेका छन् । महिलामाथि भएका दुव्र्यवहारका कुरा सुन्न र साथ दिएर आवाज उठाउन समाजको एउटा पंक्ति तयार भएको छ ।
जसले भनेपछि आउने समस्या, घटना सार्वजनिक भएपछि आउने लाञ्छनाको डरले कसैलाई भन्न नसकेर वर्षौंदेखि मनमा गडेका कुराको विषयमा बहस सुरु भएको छ । साथै पुरुषको व्यवहारलाई हेर्ने महिलाको नजरको व्याख्या सुरु भएको छ ।
मिटु र सामाजिक न्याय
मिटुको बहस र चार महिना अगाडि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्यायका लागि भएका प्रयासका बाबजुद पनि दोषी पक्राउ नपरेको, ललितपुरको गोदाम चौरको घटनामा न्यायालयले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको र बलात्कारपछि ज्यान गुमाएकी रमिला नेपालीका अभिभावक २१ महिनादेखि न्यायका लागि भौंतारिइरहेको घटना कहिले एकसाथ र कहिले फरक–फरक रूपमा बहसका विषय भएका छन् ।
बलात्कार भएको, बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा कारबाही नहुने समाजमा वर्षौं अगाडि भएका यौन हिंसाको विषयमा बोल्दैमा न्याय पाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
जुनसुकै घटनामा पनि न्यायको परिभाषा जटिल विषय हो । हाम्रो समाजमा घटनाका दोषीलाई कारबाही नै न्याय हो भन्ने कानुनी परिभाषा छ । मिटु आन्दोलनले उठाउन खोजेको विषय त्यतिमात्रै होइन । पहिलो कुरा त आफूले भोगेको दुव्र्यवहार, उत्पीडनको विषयमा बोल्नु हो ।
भर्खरै त्रिवि समाजशास्त्रका दुई छात्राले आफूलाई प्राध्यापकले गरेको यौन दुव्र्यवहारका विषयमा लेखे । ती दुई छात्राले पीडकको नाम उल्लेख नगरी आफूले भोगेको हिंसालाई सार्वजनिक गरेपछि त्रिवि र प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस चर्किन थालेको छ । कसैले ‘बाहिर–बाहिर समानताका गफ दिने, लैंगिकताको विषयमा पढाइ हुने डिपार्टमेन्टभित्रै यस्तो रहेछ’ भनेर हियाउने, नाम नतोकी विषयलाई उठाउँदा सबैप्रति शंका उत्पन्न भएकोसम्म प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् ।
ती दुई छात्राले आफूले सम्मान गरेको, आफूलाई प्राज्ञिक कार्यमा सहयोग गरिरहेको प्राध्यापकले समेत यौन दुव्र्यवहार गर्‍यो भनेर भन्न नपाउने ?
पीडकको नाम भन्नु या नभन्नु, उजुरी गर्नु या नगर्नु, आफूले भोगेका पीडालाई सार्वजनिक गर्नु वा नगर्नु त्यो प्रभावितमा निहित कुरा हो । जुन दुव्र्यवहार र उत्पीडनको घनत्वले निर्धारण गर्छ । कुन हदसम्म जाँदा प्रभावितको मनमा शान्ति मिल्छ र उसलाई समाजमा सहज हुन्छ, त्यसले सामाजिक न्यायलाई निर्धारण गर्छ ।
पुरुषको विरोध कि हिंसाको ?
सामाजिक सञ्जालमा मिटुको विषयमा बहस चल्दै गर्दा कसैले ‘घरको मान्छे नपर्दासम्मका लागि हो यो आन्दोलन’ भन्ने तरिकाले उडाउने गरेका छन् ।
त्यसको जवाफमा घरकै मानिसलाई पनि यसो भन्लान्, उसो भन्लान् भन्ने आरोप कुनै एक सन्दर्भको कुरा ल्याएर उछालिने गरिएको पनि छ । मुख्य कुरा के हो भने यो आन्दोलन साँच्चिकै राम्ररी उठ्यो भने आफ्नै घरका मानिसको विषयमा महिलाले बोल्नेछन् ।
बलात्कारका घटनाले घर भित्रको पुरुषको नजर पनि त्यति धेरै पवित्र भएको देखाउँदैन । आफ्नै दाइ, काका, मामा, बा र नजिकका नातेदारबाट बलात्कार र यौन उत्पीडनमा परेका घटनाका प्रशस्त सार्वजनिक भएका छन् ।
कुनै बलात्कारको घटना महिलाले उठाउने वा पुरुष विरुद्ध उठाउने विषय होइन । चाहे बलात्कार विरुद्धको आन्दोलन होस्, चाहे मिटु आन्दोलन वा कुनै आन्दोलनको नाम थाहा नभएर पनि आफ्नो मुद्दामा लडिरहेको कुरा होस्, यो हिंसा र उत्पीडनको विरोध हो ।
यो आन्दोलनले समाजलाई कता लैजान्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसरी प्रश्न उठाउने त्यही समुदायका मानिस बढी छन्, जसले बलात्कारीको लिंग छेदन वा फाँसीका कुरा पनि बेला–बेला गर्दै आएका छन् ।
तर यो आन्दोलनले प्रमाण सहितका दोषीलाई कारबाहीको तहमा गए पनि धेरै हदसम्म आफूले भोगेका पीडा आदान–प्रदान गर्ने र भित्र–भित्र ‘हि टु’ भनेर अर्को मानिसलाई सचेत गराउनेमा बढी केन्द्रित हुने देखिन्छ । दबाब बढ्दै जाँदा सुनुवाइ हुनेगरी कार्यक्षेत्रमा हुने दुव्र्यवहारका विषयमा राज्यले उचित पहल पनि थाल्न सक्छ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा कसैलाई दबाब, प्रभाव र कुनै पनि शक्तिको आडमा गरिने यौन हिंसाका घटना सधैं दबेर बस्दैनन् । पीडितले आफूमाथि भएका घटना कुनै पनि बेला सार्वजनिक गर्न सक्छन् भन्ने कुराले महिलामाथि हुने यौन दुव्र्यवहार न्यूनीकरण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
यौन दुव्र्यवहारमा पर्नुको दोष महिलाको होइन र यो लुकाएर, मनभित्र पकाएर बस्ने कुरा होइन भन्ने कुरा स्थापित हुँदै जाँदा महिलाको यौनिकतालाई सर्वेसर्वा बनाउने र त्यसैका आडमा दबाउने काम कम हुँदै जान्छ ।
अन्त्यमा, विगतमा भएका यौन हिंसाका विषयमा महिला बोल्न थाल्नुको खास ऐतिहासिकता छ । यो हिंसा विरोधी अभियान हो र यसले हिंसा गर्ने जोकोहीलाई प्रभावित सधैं चुपचाप रहँदैन भन्ने सन्देश दिन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०८:०१